Anitech GH701 Surround Gaming Headphone (Black) ~ ICT.com.mm
HomeAnitech GH701 Surround Gaming Headphone (Black)
Anitech GH701 Surround Gaming Headphone (Black)
လှပတဲ့ Gaming ဒီဇိုင်းအသစ်နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Anitech အမှတ်တံဆိပ် GH701 Surround Gaming Headphone (အနက်ရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး အထူးပျော့ပျောင်းတဲ့ နားကြပ်အုပ်ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အလှဆင် LED မီးရောင်စုံပါဝင်ပြီး အရောင်(၇)မျိုးအထိ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အရှည် (၂) မီတာရှိ USB Plug အသုံးပြု နားကြပ်ကြိုးနဲ့ မိမိရဲ့ကွန်ပြူတာကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Headphone... [Learn more]
Brand: AnitechFilter by: Citicom, Gaming Headphones, Over-ear Headphones
လှပတဲ့ Gaming ဒီဇိုင်းအသစ်နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Anitech အမှတ်တံဆိပ် GH701 Surround Gaming Headphone (အနက်ရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး အထူးပျော့ပျောင်းတဲ့ နားကြပ်အုပ်ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အလှဆင် LED မီးရောင်စုံပါဝင်ပြီး အရောင်(၇)မျိုးအထိ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အရှည် (၂) မီတာရှိ USB Plug အသုံးပြု နားကြပ်ကြိုးနဲ့ မိမိရဲ့ကွန်ပြူတာကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Headphone မှာ ခေါက်သိမ်းထားနိုင်တဲ့ မိုက်ကရိုဖုန်းတစ်ခု ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး အဖွင့်အပိတ်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ခလုတ်တစ်ခုနဲ့ အသံတိုး/ချဲ့နိုင်တဲ့ ခလုတ်တစ်ခုလည်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ 40mm အရွယ်အစားရှိ စပီကာကို တပ်ဆင်ပေးထားပြီး Sensitivity : 115dB S/P/L at 1KHz ဖြစ်ပါတယ်။
Surround 7.1 virtual headphone with microphone, Driver unit: 40mm 6x5mm, Frequency response: 20Hz-20 kHz, Impedance: 30 Ohm 2.0k Ohm, Maximum Power Input: 100mW 0.4mW, Sensitivity 115dB S.P.L at 1 kHz+/-2, 55dB, 0dB=1V/Pa at 1 kHz, Plug Type: USB, Cable Length: 2.0m
Wireless Gaming Headphone GH701
40mm driver with 7.1 Virtual Surroud for powerful sound
With loop LED display for up to7colors
Hasabuilt-in microphone With buttons to increase - decrease the volume and enable - disable. Can be folded.
Manufactured with high quality materials. The sponge, headrest and ear cups are soft and comfortable to wear.
Connect to the computer withaUSB cable length of approximately2meters.